Krishnap.com.np: अचम्म !! Sex पर्फमेन्स पनि जाँच्न मिल्ने
Sex को समयमा आफ्नो पर्फमेन्स कस्तो भयो भन्ने खुल्दुली सबैलाई हुने गर्छ । यसैगरी धेरैलाई आफू कस्तो सेक्स पार्टनर हुँ भनेर जान्ने चाहना हुन्छ । आफ्नो खुल्दुली मेटाउँदै क्षमता जाँच्न चाहनुहुन्छ भने ल्याउनुस् एप्पलको आइफोन । आइफोनमा एउटा एस्तो एप्लिकेसन राखिएको छ, जसले सेक्सको समयमा तपाईंको पर्फमेन्सलाई रेटिङ गर्छ । प्यासन नामक सो एप्लिकेसनले सेक्सपछि तपार्इंको पर्फमेन्सलाई अंकमा प्रस्तुत गर्छ ।
सेक्स गर्दाको समयमा आइफोनलाई वरिपरि कतै राखिदिनुस् । शरीरमा नै राख्नुभयो भने नतिजा वास्तविक हुने कम्पनीको दाबी छ । सहवास सुरु गरेपछि फोनमा रहेको प्यासन एप्लिकेसन अन गर्नुस् । अन भएपछि यसमा भएको एक्सेलोमिटरले तपार्इंको सक्रियता जाँच्न थाल्छ ।
तपाईंको पर्फमेन्स रेटिङ गर्ने आधार तीनवटा छन् । पहिलो तपार्इंको चिच्याहट, दोस्रो व्यतीत गरेको समय र तेस्रो गति । गतिले सहवास समयमा भएको मुभमेन्ट देखाउँछ ।
सहवास सकिएपछि स्टप बटन क्लिक गर्नुस्, अनि हेनुस् नतिजा । सेक्स मिटरमा उच्च स्कोर १० छ । तपार्इंले आफ्नो पर्फमेन्सको आधारमा एकदेखि १० को बीचमा अंक प्राप्त गर्नुहुनेछ । हरेक प्वाइन्टमा तपार्इंको पर्फमेन्स कस्तो भयो भन्ने खालको कमेन्ट पनि पढ्न सक्नुहुनेछ ।
आफ्नो पर्फमेन्सप्रति सन्तुष्ट हुनुभएन भने तपार्इंले पुनः प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ । आइफोनमा भएको प्यासन अन गर्नुस्, पुनः सहवासतर्फ अघि बढ्नुस् र स्कोर बढाउनुहोस् । आफ्नो स्कोरलाई अनलाइन लिडरबोर्डमार्फत अपलोड गरी अन्यसँग तुलना गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ ।
कसरी पाउने प्यासन ?
आफ्नो आइफोनमा प्यासन राख्न एप्पलको एप्लिकेसन स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्नुहोस् । एप्पलले प्यासन ५ डलरमा बिक्री गरिरहेको छ ।
एप्पलका लागि क्रिस अल्वेयर्सले प्यासन एप्लिकेसन तयार गरेका हुन् । अफिसमा साथीभाइसँगको हाँसो–ठट्टाका क्रममा प्यासनको कन्सेप्ट आएको उनले बताए ।
Posted by Krishna Pokhrel at 8:45 PM